Sofia Coppola iyo Bill Murray filimkoodii On the Rocks si ay ugu tababaraan Bandhig Faneedka New York | Waxaan ka socdaa mac
Sofia Coppola iyo Bill Murray filimkoodii On the Rocks si ay ugu tababaraan Bandhig Faneedka New York
Apple kaliya diirada ma saareyso shaqadeeda ku abuuri nuxur qaab taxane ah adeegga fiidiyowga ee soo dejinaya, laakiin sidoo kale waxay si gaar ah fiiro gaar ah u siineysaa filimada, filimada lagu sii deyn doono tiyaatarada oo hadhow laga heli doono Apple TV +.
Mid ka mid ah filimada sida weyn loo wada sugayo waa midka ay Sofia Coppola soo saareyso isla markaana ay la jileyso Bill Murray. Waxaan ka hadlayaa filimka On the Rocks filim kaas ayaa ka soo muuqan doona bisha Oktoobar Apple TV + laakiin marka hore waxay ku sameyn doontaa daabacaadda 58aad ee Bandhigga Filimada New York.
Qaybta tooshku waxay bilaabmi doontaa Sebtember 17 waxayna dhammaan doontaa Oktoobar 11, markaa waxay noqon doontaa laga bilaabo Oktoobar 11, marka filimku si toos ah ugu yimaado adeegga fiidiyowga ee Apple. Apple waxay dooneysaa inay ku sii deyso xafladaha ama shineemooyinka filimadooda oo dhan si kuwaani u qalma Abaalmarinta Akadeemiyada Hollywood.
Dhowr maalmood ka hor, Apple wuxuu soo xirtay kanaalka YouTube-ka goos gooska koowaad ee filimkan.
Rashida Jones, waxay jilaysaa gabadha uu dhalay Bill Murray, halka Marlon Wayans ay u ciyaareyso doorka ninkeeda, oo ah nin bilaabay inuu la shaqeynaya xafiiska waqti dambe asxaabtiisa cusub iyo Laura (Rashida Jones) ayaa ka baqaya waxa ugu xun.
Laura waxay u tagtaa ninka kaliya ee ay ku kalsoon tahay: Felix (Bill Murray) sidaa darteed labaduba waxay baaraan xaaladda. Intii baaritaanka socday, labadaba Waxay u safraan New York xaflad ilaa xaflad iyada oo loo marayo meelaha moodada ah ee xarunta lagu ogaanayo sida uu yahay xiriirka aabaha iyo gabadha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sofia Coppola iyo Bill Murray filimkoodii On the Rocks si ay ugu tababaraan Bandhig Faneedka New York
Google waxay ku shaqeyneysaa nooc ka mid ah Studio-yada Android oo loogu talagalay Apple Silicon
Cilmi-baarista ka-hortagga ayaa tiri AirPods Khasaaraha iibka